नेपालमा बोलिने १२३ भाषाकै शब्दकोश | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १५ फाल्गुन २०७५, बुधबार १६:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । नेपालमा बोलिने १२३ भाषाकै शब्दकोश बन्ने भएको छ। लोप हुन लागेकाबाट भाषा आयोगले काम थालेको छ। २९ अति लोपोन्मुख र ३७ वटा लोपोन्मुख छन्। आयोग अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीका अनुसार हरेक वर्ष १० देखि १५ भाषाको शब्दकोश निर्माण गर्ने योजना छ।
जेरुङ, चाम्लिङ, साम्पाङ, बेलहारे, लेप्चा, आठपहरिया, कुसुन्डा र स्युवाको शब्दकोश बनाइएको छ। लिङखिम, बज्जिका, छन्त्याल, सन्थाल, भोटे, शेर्पामा काम भइरहेको अधिकृत मनोज पौड्यालले बताए। गत वर्ष हायू, सुरेल, साम्पाङ, बेलहारे, जेरुङ, बोटे, दराई, राउटे, दुरा, कुमाल, ल्होमी, कुसुन्डा, किसान, राजी, व्यासी, राजवंशी, तिलुङ, उराव, सोनाहा, दनुवार, जुम्ली, मेचे, मगहीका शब्द संकलन गरिएको थियो। आयोगले यो वर्ष थप ६ भाषाको शब्द संकलन गरेको छ।
हायू, सुरेल, साम्पाङ, बेलहारे, व्यासी, राजवंशी, तिलुङ, उराव ९कुडुख०, सोनाहा, दनुवार, जुम्ली, मेचे, भोजपुरी, स्युवा, मगही, याक्खा, छन्त्याल, थकालीको वर्णनिर्धारण, शब्द संकलन, भाषिक इतिहास लेखनजस्ता कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम गर्न आयोगले विज्ञ समूह गठन गर्छ। व्याकरण निर्माण र शब्द संकलनका लागि ३ लाख बजेट आयोगले उपलब्ध गराउँछ। समूहले ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म शब्द संकलन गर्नुपर्छ।
काठमाडौँ । जनप्रतिनिधिले नै कानुन हातमा लिएपछि त्यसको कार्यान्वयन कसले गर्ला ? प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री…
यी हुन पार्टी एकताप्रति असन्तुष्ट नेकपाका वृद्ध नेता !
काठमाडाैं । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएसँगै यसका नेता एकता मजबुत पार्न…
विभाजनको संघारमा नेकपा, दुई शीर्ष नेताबीच बोलचाल बन्द
काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रुपमा लिएको छ ।
अदालतबाट आयो यस्तो आदेश, पप्पु कन्स्ट्रक्सन परो अन्यौलमा
काठमाडौं । जता पनि ठेक्का लिने र सम्झौताबमोजिमको काम नगर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सन अर्को सरकारी कार्यालयको कालोसूचीमा पर्ने भएको छ…